“Inaad kula ciyaarto koox England ah tartamada Yurub waa arrin aad u adag” – Rio Ferdinand – Gool FM
(Manchester) 08 Abril 2020. Halyeyga kooxda kubadda cagta Manchester United Rio Ferdinand ayaa carabka ku adkeeyay in kulamada uu kaga hor imaan jiray tartamada yurub kooxaha horyaalka Ingiriiska ay ahaayeen kuwa ugu adag.
Rio Ferdinand ayaa sheegay in kulamada ay la ciyaarayaan kooxaha Premier League ay ahaayeen kuwo cadaadis badan, maadaama ay labada kooxood ka ciyaaraan hal horyaal.
Ferdinand ayaa wuxuu xubin ka ahaa jiilkii dahabiga ahaa ee u qaaday Manchester United koobka UEFA Champions Leagu sanadkii 2008, kaddib markii ay rigoorayaal kaga adkaadeen kooxda reer London ee Chelsea.
Haddaba Rio Ferdinand oo ka hadlayay aragtidiisa ayaa wuxuu yiri:
“La ciyaarista kooxaha Ingriiska waxay sii kordhineysaa cadaadis, sababtoo ah waxaad la ciyaareysaa asxaabtaada, oo qaarkood ay ka mid yihiin kuwa aad la soo kortay, xaaladaas waa mid aad u walaac badan”.
“Marka aad ka adkaato koox ka socota Italy, Spain ama Germany, waxaad arki doontaa kaliya sanad ama labo sano kaddib”.
“Laakiin haddii aad Chelsea kaga soo badiso magaalada Moscow, waxay noqon doontaa taariikh, sababtoo ah waa muhiim inaad la macaamisho mar walba aad la ciyaareyso koox England ah, oo aad booqaneyso garoonkeeda labo jeer sanadkii ama in ka badan, iyo taageerayaasha aad aragto.”